Archive du 20190903
Andry Rajoelina Ny manodidina azy ihany no mamitaka azy
Niditra an-tsehatra ny filohan’ny Repoblika raha araka ny fantatra, tamin’ilay raharaha nisamborana sy nanadihadiana mpanao gazety mpanohitra, vao nilamindamina ny raharaha.
Vondron’olon-tsotra « Tsy misy demokrasia intsony eto »
Nivoaka tamin’ny fahanginany ny filoha nasionalin’ny Vondron’Olon-Tsotra (VOT) manoloana ny zava-misy eto amin’ny firenena ankehitriny.
Tabera Randriamanantsoa “Hanao kongresy ny mpanohitra »
Hanatanteraka kongresy ny RMDM na ny “Rodoben’ny Mpanohitra ho amin’ny Demokrasia eto Madagasikara”, handinihan’izy ireo ny
Olivier Rakotovazaha “Mbola misy tsy mazava io lalàna mifehy ny mpanohitra io”
Tokony hisy filoha lefitra fahafito avy amin’ny fanoherana ao amin’ny antenimieram-pirenena, hoy ny loholona Olivier Rakotovazaha.
Raharaha Elikoptera Amin’ny 16 septambra ny fitsarana
Nalefa teny amin’ny fampanoavana avy hatrany ny raharaha hanenjehana ny mpanao gazety Nadia Raonimanalina,
Fanenjehana mpanao gazety mialoha ny fiavian’ny Papa Manahy ny mpitsara iraisampirenena
Fanontaniana mipetraka dia ny hoe inona no teti-dratsy na « mauvaise intention » tadiavin’ireo mpanao gazety atao, hoy ny mpitsara iraisampirenena,
Fahalalahana hiteny Maty momoka ny tolona natao 3 taona lasa ?
Mahalasa saina ny fanehoan-kevitry ny filohan’ny holafitry ny mpanao gazety, Gerard Rakotonirina, izay nanambara fa tato ho ato dia nisinisy ihany ny fampiantsoana mpanao gazety.
Hain-trano tetsy Anosibe Tokantrano folo tsy mbola mahita aleha
Tokantrano folo tamin’ireo 52 kilan’ny afo tetsy Anosibe Andrefana I no mbola mijanona ao an-toerana hatramin’ny faran’ny herinandro teo noho ny tsy fahitan’izy ireo izay tokony halehany.
Fiara miditra eto Madagasikara Nihena hatrany nandritra ny 3 taona
Tato anatin’ny 3 taona farany dia nahitana fihenana ny isan’ny fiara miditra eto Madagasikara na misy aza ny ezaka ataon’ireo mpivarotra mampahafantatra ireo tolotra misy.